Wordplanet: CIBRAANIYADA / Hebrews - Kitaabka Quduuska Ah - Axdiga Cusub
CIBRAANIYADA - Cutub 1
CIBRAANIYADA - Cutub 2
CIBRAANIYADA - Cutub 3
CIBRAANIYADA - Cutub 4
CIBRAANIYADA - Cutub 5
1Wadaad sare oo kasta, oo dadka laga dhex bixiyo, waxaa dadka loogu doortaa waxyaalaha Ilaah ku saabsan, inuu hadiyado iyo allabaryoba u bixiyo dembiyada aawadood.
CIBRAANIYADA - Cutub 6
CIBRAANIYADA - Cutub 7
CIBRAANIYADA - Cutub 9
1Xataa axdigii hore wuxuu lahaa qaynuunno ku saabsan caabudid, iyo meel quduus ah ee dunidatan.
CIBRAANIYADA - Cutub 10
1Waayo, sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo iman doona, laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas qudheeda. Oo caabudayaasha marnaba kaamil kagama uu dhigi karo allabaryo sannad walba had iyo goor la bixiyo.
CIBRAANIYADA - Cutub 11
CIBRAANIYADA - Cutub 13
1Jacaylka walaalnimadu ha sii jiro.